Kuwusizo kangakanani ukusebenzisa i-Search Engine Optimization yebhizinisi, ikakhulukazi ngokwephrojekthi yakho encane yokuthumela phansi?
Namuhla, abantu abaningi ngokwengeziwe benza ukuthenga kwabo ngokusebenzisa amandla amakhulu nokulula kwe-Intanethi. Yingakho ama-dropshippers abe yizindawo ezithandwayo kakhulu zokwenza inthanethi futhi uthole cishe noma iyiphi into oyifunayo. Futhi manje okuningi kokuthengwa okunjalo kwenziwa ngisho nokulula, njengoba abantu basebenzisa nje izinjini ukufaka umbuzo wegama elingukhiye, futhi ekugcineni, thola okudingayo. Futhi lapha kuza umbuso we-SEO! Kodwa ukuthi ungasebenzisa kanjani lawo mathuba amakhulu kakhulu we-Search Engine Optimization yebhizinisi osebenza kumodi yokuthumela phansi? Ngincoma ukubukeka okufushane ngokusebenzisa lezi ziphakamiso eziyisisekelo ngezansi. Ngithemba ukuthi bazosiza imiklamo eminingi ye-novice ye-drop-shipping ukuze iphile ezweni lomncintiswano wemakethe enobudlova kusukela ekuqaleni. Lapha kukhona!
Yenza igama elingukhiye lokucwaninga Ukucwaninga ngamagama angukhiye e-Long Tail
Okokuqala, ukwenza i-Search Engine Optimization yebhizinisi ukuqhuba ucwaningo lwegama elingukhiye. Ngisho lapha kuzodingeka ucabange ngamagama athile nemishwana, ezifanele kakhulu ebhizinisini lakho, futhi kungenzeka ukuthi zisetshenziswe ngabasebenzisi bombuzo wosesho lapho ufuna imikhiqizo noma amasevisi. Iqhinga ukuthola ukulinganisela okunempilo phakathi kokuthandwa nokuncintisana kakhulu niche. Ngisho ukuthi kungenzeka ukuthi izinkulungwane eziningi zezicelo zokusesha zifana ne "macbook pro 13", kodwa ngaphansi kakhulu ezinjenge "intengo engcono kakhulu ye-black macbook pro 13 ye-retina display". Vele ugcine lokho engqondweni uma ukhetha amagama angukhiye amancane omsila we-website yakho.
Yiba nokuqukethwe okuqinile kokuthinta okuqhubekayo
khumbula - okuqukethwe kwakho yinkosi. Ungalokothi ubeke isikhathi sakho emizamweni yokwakha okuqukethwe okuphezulu, ocebile ngamagama angukhiye omude omsila. Lo mbono ulula - udinga nje ukuthi okuqukethwe kwakho kube okufundisayo (funda - ewusizo) izivakashi ngangokunokwenzeka. Ngokwenza ngale ndlela, zizwe ukhululekile ukungena ngemvume okuqukethwe kwakho kuwebhusayithi ngezici ezihlukahlukene zokusebenzisa umsebenzisi njenge-YouTube. Lokho kuzokwenza izivakashi zakho zibe yingcezu yeseluleko esihle, ukufundisa, noma incazelo yomkhiqizo nemihlahlandlela, okuholela emiphumeleni yakho ephakeme yokuhweba. Ngesikhathi esifanayo, qhubeka ulandelela ukukhangisa kokuqukethwe kwakho, ikakhulukazi kusukela kumbono wezinjini zokusesha. Ukwenza kanjalo, ungakhohlwa ukuthi uzodinga lokho ukuze uhlonishwe abashayeli bokusesha, uthole kangcono i-indexed nabo, ngakho-ke ubekwe ngaphezulu emiphumeleni yokusesha ye-Google. Leyo yindlela efanele yokuhweba ibhizinisi lokuthumela phansi, elitholakala kuphi emhlabeni.
Kusho ukuthi kufanele ube nesethi ye-backlinks yekhwalithi exhumanisa iwebhusayithi yakho neminye imithombo e-intanethi ukuze uthole ukuvakashelwa okwengeziwe, ngakho-ke kukhulisa imoto yakho, ukuphakamisa isikhundla sakho samanje kumiphumela yokusesha ye-Google, nokunikeza ukugeleza okukhulu kwamakhasimende angathuthuki, okungaba ziphenduke zibe zangempela. Ungafaki imizamo yokwenza okuthunyelwe kumaforamu, amavidiyo we-YouTube asanda kulayishwa, kanye nezixhumanisi ezahlukene zokuxhumana zenhlalo. Bangase babe ithuluzi eliphumelelayo ngempela uma lisetshenziswe ngokuhlakanipha. Kepha mina, ngincoma ukuqasha ochwepheshe ukuthi bakwenze lokhu lokhu okungenani ngezigaba zakuqala zokuthuthukiswa kwebhizinisi lakho. Kungakhathaliseki ukuthi umsebenzi wakho ungubani, ngeke ulizisole, ngiyaqiniseka.
Ekugcineni, izinzuzo zangempela ze-Search Engine Optimization yebhizinisi azikwazi ukuhambisana nezigaba ezimbili noma ezintathu kuphela Source . Kodwa ngithemba ukuthi imihlahlandlela yami emifushane izosiza amanye ama-novice dropshippers ngokwanele, ngakho-ke ngizobonga lapha!